अमेरिकी राष्ट्रपतिय चुनाव अपडेटः २०१६ मा ट्रम्पले जीतेको यो राज्यमा बाइडेनले मारे बाजी ! – Dainik Sangalo
अमेरिकी राष्ट्रपतिय चुनाव अपडेटः २०१६ मा ट्रम्पले जीतेको यो राज्यमा बाइडेनले मारे बाजी !
November 4, 2020 317
२०१६ को राष्ट्रपति चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पले जीतेको एरिजोनामा यससटक जो बाइडेनले चुनाव जितेका छन् । ११ इलेक्टोरल कलेज मत रहेको एरिजोनामा बाइडेनले जीतेका हुन् ।
सन् २०१६ को चुनावमा ट्रम्पले ४८ दशमलव ११ प्रतिशत मत ल्याएका थिए भने हिलारी क्लिन्टनले ४४ दशमलव ६ प्रतिशत मत ल्याएकी थिइन् ।
अहिले ७६ प्रतिशत मत परिणाम अनुशार बाइडेनले १२ लाख ९० हजार बढी मत ल्याइसकेका छन् । ट्रम्पले भने झण्डै ११ लाख मत ल्याएका छन् । एरिजोनामा ट्रम्पले सन् २०१६ को चुनावमा १२ लाख ५२ हजार भन्दा धेरै मत ल्याएका थिए ।
अहिलेसम्मको मत परिणाम अनुशार जो बाइडेनले २२३ इलेक्टोलर मत जीतेका छन् । राष्ट्रपति चुनावमा निर्वाचित हुनका लागि कम्तीमा २७० इलेक्टोरल मतको आवश्यकता पर्छ ।
त्यस्तै अहिलेसम्मको मत परिणाम अनुशार डोनाल्ड ट्रम्पले १४८ इलेक्टोलर मत जीतेका छन् । पपुलर भोटमा पनि बाइडेनले ट्रम्पलाई उछिनेका छन् ।
अब सबैको ध्यान टेक्सास र पेन्सिलभेनियामा रहेको छ । कुनै बेला रिपब्लिकनको पकड रहेको जर्जिया अहिले ब्याटलग्राउण्ड भएको छ । जर्जियामा ट्रम्प अगाडि देखिएका छन् । सन् २०१६ मा ट्रम्पले जितेको आयोवामा पनि बाइडेन अगाडि देखिएका छन् ।
५० वटा राज्य र वासिंटन डिसीबाट जनसंख्याको अनुपातको आधारमा ५३८ इलेक्टोरल मतको तय गरिएको छ ।
Prevभारतिय सेनाध्यक्ष नरवणेलाई ‘कालो झण्डा देखाउँछु’ भन्ने पुण्य गौतम पक्राउ !
Nextफेरि ह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् तोलाको कति पुग्यो ?
कोरोनाको नयाँ रूप : भारतबाट मलेसिया पुगेका व्यापारीमा १० गुणा प्राणघातक भाइरस
कोरोनाको कहर, विदेशमा अलपत्र परेका ४६ हजारसहित २४६ नेपालीको शव स्वदेश ल्याइयो
कोरोनाका कारण नेपाली पत्रकारको निधन